Android phone ​များ​အ​တွက် Zawgyi Keyboard and Font ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
chu chu September 6, 2012 at 11:32 AM
Sayar..I've finish download zip file.After that ..asking password.I don't know what will be enter.Plz help my trouble..
Inda Pala July 26, 2013 at 6:56 AM
Go to Settings>> Display>> Font Style. There change Zawgyi-one ttf as default. That's all.
Di Po November 14, 2013 at 6:28 AM
Di Po November 14, 2013 at 6:30 AM
I really really need Myanmar font
mon jal September 6, 2012 at 12:34 PM
​ဒေါင်း​လို့​ရ​ပါ​တယ်...​ဒါ​ပေ​မယ်. setup file ​မ​ပါ​လာ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ်..
Than Htut September 6, 2012 at 6:16 PM
clash 4s said...
​ဆ​ရာ​ခင်​ဗျာ ​ကျ​နော်​ဖုန်း​က HTC CHACHA​ပါ​ခင်​ဗျာ Frozen keyboard ​အ​မှန်​ခြစ်​ပေး​ပြီး​သွား​ပါ​ပြီး​ခင်​ဗျာ FONT​မှာ ZAWGYI-၁​ကို​ရွေး​ပေး​ရ​မှာ ​ဘယ်​မှာ​ရွေး​ပေး​ရ​မှန်း​မ​သိ​လို့​ပါ​ခင်​ဗျာ ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး
nyi lay yay
Htc ​မှာ rooting ​အ​ရင်​လုပ်​ရ​ပါ​တယ်။​ဒီ​လင့်​လေး​မှာ​ဖတ်​လိုက်​ပါ
Than Htut September 6, 2012 at 6:19 PM
kyaw thu September 6, 2012 at 11:15 PM
font ​က setting >>> display >>> font style ​ကို ​သွား​လိုက်​ရင် ​ရ​ပါ​တယ်.. ​ကျွန်​တော်​က galaxy note ​သုံး​နေ​တာ​ဆို​တော့.. ​နေ​ရာ​လွဲ​နေ​ရင် sorry ​ပါ​ဗျာ..​ကျွန်​တော့်​ရဲ့​ဖုန်း​ထဲ​မှာ. ​မြန်​မာ​လို ​ရ​သွား​ပါ​တယ်...
​ဒါ​ပေ​မယ့် web page ​တွေ​မှာ​တော့ ​ထုံး​စံ​အ​တိုင်း ​အ​တုံး​တုံး​လေး​တွေ​နဲ့...
Than Htut September 7, 2012 at 12:32 PM
font ​နဲ့ keyboard ​က ​သီး​သန့်​ပါ။ font style system ​က Samsung ​မှာ​ပဲ​ပါ​တာ​ပါ။ ​ကျန်​တဲ့​ဖုန်း​တွေ​က rooting ​လုပ်​ပီး​မှ font replacement ​လုပ်​ရ​ပါ​တယ်။
​သ​ဘော​ကHuawei C8810 ​ကို myanmar font ​သုံး​ချင်​ရင်​အောက်​မှာ​လိုက်​လုပ်​ကြည့်​လိုက်​ပါ။​ဆ​ရာ​လုပ်​တာ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး။​ဝေ​မျှ​တာ​ပါ။
*****Huawei C8810 Root ​လုပ်​ရန်*****
1. http://www.mediafire.com/?0d4axu7nya4o8r4 ​ဒေါင်း​ပါ။
2. http://www.mediafire.com/?vm79ld7vwbcwdpv ​နောက်​တ​ခု​နော်။ ၂​ဖိုင်​လုံး​နော်။
Copy No1.download file(update.zip) to your sd card
usb debugging mode on your phone and power off. (setting/application/development/)
extract No2. download file and run -órecovery¦¦-=.bat (at Desktop)
hold vol down + power button, press any key pc keyboard for recovery.bat auto work. Andafew minute later recovery done!
Recovery mode is auto open, if not vol up + power key
and then chose-apply update from sdcard >> -Yes >> – Insatll /sdcard/update.zip
Restart your phone and you will see super user in applications.
Now your phone is root.
*****Myanmar Font Installation*****
Font ​တည်.​နည်း ​လေး​ထပ်​ပြော ​ပါ​မယ် ၊​မ​သိ​တဲ.​သူ​တွေ ​လဲ ​သိ​သွား​အောင် ​ပေါ့​နော်။
MMAS FontChanger Download ​ဆွဲ​ရန် http://db.tt/hWke0kQQ
MMAS ​က ​ရေး​ထား​တဲ. FontChanger ​ကို Install ​လုပ်​ပါ။​ပြီး​လျှင် Fontchanger ​ကို​ဖွင့်​ပါ။
Superuser ​ကို Grant ​ကို ​နှိပ်​ပါ။​ပြီး​လျှင် ​ဇော်​ဂျီ​ဖောင့်​ပြောင်း​ရန် ​ကို ​နှိပ်​ပါ။
Restart ​ကျ​သွား ​ပါ​လိမ်​မည်။​ဒါ​ဆို Myanmar font ​ရ​သွား​ပါ​ပြီး​ခင်​ဗျာ
*****Myanmar Keyboard Installation*****
keyboard ​က​တော့​အ​ပေါ်​မှာ​ဆ​ရာ​ကို​ညီ​နေ ​ရေး​ထား​တာ​က ​အ​ကောင်း​ဆူံး​ပါ။
​ပန်း​နှင်း​ဆီ(​ကြယ်​က​လေး) August 15, 2014 at 6:41 PM
c8650 ​ကို ​လုပ်​တာ​မ​ရ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ်​ရှင့်
​ပြော​ထား​တဲ့​အ​ဆင့်​တိုင်း ​အ​စဉ်​လိုက်​လုပ်​တာ​ပဲ​ကို root ​မ​လုပ်​ရ​သေး​ဘူး​ပဲ ​ပြော​နေ​တယ်​ရှင့်
moe min September 8, 2012 at 10:33 PM
​ဆွဲ​သွား​ပါ​တယ်​အ​ကို​ရေ ​ကျေး​ဇူး​ပါ ​ခင်​ည
moe min September 8, 2012 at 10:38 PM
Shwebo September 9, 2012 at 10:08 AM
myat moe September 11, 2012 at 9:23 AM
This application is only for Samsung phone?How about LG phones?I don't want to root my phone because I am afraid my fonts have some errors.Can u explain advantages and disadvantages of root?
Thura Yanshin September 11, 2012 at 11:37 PM
​အ​ကို​ရေ u8500 ​အ​တွက်​လေး ​ရေး​ပေး​ပါ​ဦး​နော် ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်
Naing Lynn September 13, 2012 at 12:35 PM
​အစ်​ကို​ရေ..... HTC Desire VC ​မှာ root ​လုပ်​ပုံ​လေး​ပြော​ပေး​ပါ​လား။ ​ကျွန်​တော် ​အ​ခတ်​တွေ့​နေ​လို့​ပါ။
Than Htut September 14, 2012 at 3:24 PM
for Thura Yanshin(U 8500)
z4root.1.3.0.apk ​ကို U8500 ​တွင် SD ​ကဒ်​မှ​တ​ဆင့် install ​လုပ်​ပါ။
U8500 ​တွင် z4root.1.3.0 ​ကို open ​ပီး PERMANENT root ​ကို​နှိပ်​ပါ။ reboot ​ကျ​သွား
​ပီး ​ဖုန်း ​တက်​လာ​လျှင် superuser ​အ​ရိုး​ခေါင်း​လေး​တွေ့​ရ​ပါ​ပီ​ဗျာ။
Than Htut September 14, 2012 at 4:29 PM
for Naing Lynn(HTC Desire VC)
​ညီ​ရေ,​ညီ HTC ​ရဲ့ ​ဗား​ရှင်း​က​ဘာ​မှန်း​မ​သိ​တော့​အ​ကို​သိ​တာ​တွေ​ပဲ​ဝေ​မျှ​ပ​ရ​စေ
HTC ​က root ​မ​လုပ်​ခင် bootloader Unlock ​အ​ရင်​လုပ်​ရ​ပါ​တယ်။
*****Bootloader unlock ​လုပ်​ရင်​သိ​ထား​ရ​မှာ​က Factory Data reset ​ဖြစ်​ပါ​လိမ့်​မယ် ​ဖုန်း​ထဲ​က Data ​အား​လုံး​ကို SD card ​ကို​ပို.​ထား​ပါ။
၁။ www.htcdev.com ​မှာ Register ​လုပ်​ပါ။ Email​ကို Unlock_code.bin ​ဖိုင်​ပို.​မှာ​ပါ
၂။ www.htcdev.com/bootloader ​ကို​ဝင်​ပါ။ ​ကိုယ်​နှင့်​သက်​ဆိုင်​တဲ့ ​ဖုန်း​အ​မျိုး​အ​စား​ကို​ရွေး​ပါ။ ​မ​ရှိ​ရင် all other supported models ​ကို​ရွေး​ပါ။ Begin Unlock Bootloader ​ကို ​နိပ်​ပါ။​သ​တိ​ပေး​စာ​တမ်း​တွေ​ပေး​ပါ​မယ် Yes ​နိပ်​ပါ။ ​အား​လုံး​ကို ​အ​မှန်​ခြစ်- Next​လုပ်​ပါ။
​ဘက်​ထ​ရီ​ဖြုတ်​ပြီး​ပြန်​တပ်​ပါ။Volume Down ​နဲ. Power ​ဖိ​ထား ​ခြင်း​ဖြင့် Bootloader mode​စ​တင်​ဝင်​ရောက်​ပါ။Volume buttons ​အ​ပေါ်​အောက်​သုံး Fastboot ​ကို Highlight ​ဖြစ်​အောင် ​ပြု​လုပ် Power button ​ကို​နိပ် ။ ​ဖုန်း ​နှင့် ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို Usb ​ချိတ်​ပါ။
​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ new folder ​တစ်​ခု​ဆောက်​ပါ။ Android ​လို့ rename ​လုပ်(​ဥ​ပ​မာ​အ​နေ​နဲ. : C:\_Android)
https://www.dropbox.com/s/gj2zr9twok7fzxs/Android.zip ​ကိုdownload ​လုပ်​ပီး zip ​ဖြည့် ​ပြီး ​ဖိုင်​သုံး​ဖိုင်​ကို C:\_Android ​သို.​ပို.​ပါ။
​အ​ဆင့်(၃)(Anti-virus Software ​ခ​ဏ​ပိတ်​ထား​ပါ)
command prompt ​ကို​ဖွင့်​ပါ။ ( Start > Run > Type CMD )
Command Prompt ​မှာ cd c:\_Android ​လို့​ရိုက်​ပါ။
Command Prompt ​မှာ fastboot oem get_identifier_token ​လို့​ရိုက်​ပါ။
​ပေါ်​လာ​တဲ့ Token ​တွေ​ကို <<<< Identifier Token Start >>>>
​မှ​စ​ပြီး <<<<< Identifier Token End >>>>> ​အ​ဆုံး​ထိ ​ရွေး​ပြီး Right Click > Mark > highlight the block of text > Right click to copy ​နိပ်​ပြီး My Device Identifier Token: ​ဆို​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ Past ​လုပ်​ပါ Submit ​နိပ်​ပြီး Email ​မှာ unlock code binary file ​ကို​လက်​ခံ​ထား​ပါ။
Email ​က​ရ​လာ​တဲ့ Unlock_code.bin ​ကို C:\_Android ​ထဲ​ထည့်​ပါ။
Command Prompt ​မှာ fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin ​လို့​ရိုက်​ပါ။
***​ဖုန်း​မှာ disclaimer ​ပေါ်​လာ​ပါ​လျှင် Volume ​ခ​လုတ်​ဖြင့် Yes ​ကို​ရွေး​ပါ။ ​ကိုယ်​ဖုန်း​ထဲ​မှာ Data ​တွေ factory default settings ​ဖြစ်​ပီး​ရင် Bootloader Mode ​မှာ Unlock ​ရင် Bootloader Unlock​လုပ်​တာ ​ပြီး​ဆုံး​ပါ​ပြီ။
​ဒါ​ဆို ​စ​တင် Root ​လုပ်​နိုင်​ပါ​ပီ
How to root HTC Desire VC
http://hotfile.com/dl/167408315/e492864/HTC_desire_VC_root.rar.html ​ကိုdownload ​လုပ်​ပါ။
xxxxx ​ဘက်​ထ​ရီ​ဖြုတ်​ပြီး​ပြန်​တပ်​ပါ။ Volume Down ​နဲ. Power ​ဖိ​ထား ​ခြင်း​ဖြင့် Bootloader mode​စ​တင်​ဝင်​ရောက်​ပါ။Volume buttons ​အ​ပေါ်​အောက်​သုံး Fastboot ​ကို Highlight ​ဖြစ်​အောင် ​ပြု​လုပ် Power button ​ကို​နိပ် ။ ​ဖုန်း ​နှင့် ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို Usb ​ချိတ်​ပါ။ download ​လုပ်​ပီး​ရ​လာ​တဲ့ recovery.bat file ​ကို run ​လိုက်​ပါ။
root.zip ​ကို sd card ​ထဲ​ထည့်​ပီး update in recovery mode(​ဘက်​ထ​ရီ​ဖြုတ်​ပြီး​ပြန်​တပ်​ပါ။ Volume Down ​နဲ. Power ​ဖိ​ထား ​ခြင်း​ဖြင့် Bootloader mode​စ​တင်​ဝင်​ရောက်​ပါ။Volume buttons ​အ​ပေါ်​အောက်​သုံး Recovery ​ကို Highlight ​ဖြစ်​အောင် ​ပြု​လုပ် Power button ​ကို​နိပ် ။ ​ဖုန်း ​နှင့် ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို Usb ​ချိတ်​ပါ။)
:))))) Now U will reboot U r Phone and see Superuser ^-^
Nickolaus Andrein July 10, 2013 at 11:02 AM
Huawei G610-U00 ​မှာ ​မြန်​မာ​စာ ​ဖောင့်​သွင်း​ချင်​လို့ ​ဘယ်​လို ​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​ပြော​ပေး​ပါ​အုံး..
Yan Shin September 20, 2012 at 10:27 PM
Mobile House September 23, 2012 at 8:59 AM
Android ​ဖုန်း​မြန်​မာ​ဖောင့် ​ထည့် ​နည်း ​နဲ့ Mobile ​တ​ခြား​နည်း​ပ​ညာ ​များ ​လေ့​လာ​လို ​လျှင် www.mobilehouse.co.nr ​ကို ​လာ ​ခဲ့ ​ကြ ​ပါ ။
Yaza phwarr September 24, 2012 at 5:20 PM
​အ​ကို​ရေ ​ဒေါင်း​လို့​တော့​ပြီး​တယ် Rar ​က​ဖြေ​လို့​မ​ရ​ဘူးpassword ​တောင်း​နေ​တယ်​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ
Nyein Zaw September 25, 2012 at 10:24 PM
​အ​ကို ​ညီ​လည်း keyboard ​ကို wizard ​လုပ်​တယ်။ password ​တောင်း​နေ​တယ်​ဗျာ ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး။
yan October 8, 2012 at 1:43 PM
password ​က konyinaymin@gmail.com ​လေ​ဗျ ​အ​ရှေ့​က ​ပိုစ်​တွေ​မှာ​တင်​ပေး​ထား​ပြီး​ပြီ​လေ​ဗျ ​သေ​ချာ​လေး​လိုက်​ဖတ်​ကြ​ပါ​အုံး
​အ​လိ​မ္မာ​တုံး October 11, 2012 at 4:08 AM
​အ​ကို​ရေ ​ကျ​တော်​က ​အ​ကို​ပေး​ထား​တဲ့​ဖိုင်​ကို​လည်း​ဒေါင်း​လော့ဒ် ​ဆွဲ​ထား​ပြီး​ပြီ ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အဲ​ဒီ​ဖိုင်​ကို​ဖွင့်​ပြီး ​ထွက်​လာ​တဲ့ ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​ဘယ်​ကို​မှ ​ဆွဲ​လို့ ​မ​ရ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ် ​သူ​က ​ကျ​တော့်​ကို
password ​တောင်း​နေ​တယ် ​ကျ​တော်​လည်း​လျောက်​ပြီး​ထည့်​ကြည့်​သေး​တယ် ​ဘယ်​လို​မှ​မ​ဖြစ်​လာ​ဘူး ​အ​ကို​ပြော​ထား​သ​လို ​အဲ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​ဖုန်း memory card ​ကို ​တိုက်​ရိုက်​ထည်း​ပြီး installing ​လုပ်​ဖို့ ​နေ​နေ​သာ​သာ ​ကွန်​ပြူ​တာ​ထဲ​က​ဟာ​ကို​တောင် ​ဖုန်း memory ​ထဲ​ထည့်​ဖို့password​တောင်း​နေ​လို့​အ​ကို​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​ဆို ​သေ​ချာ​လေး​ရှင်း​ပြ​စေ​ချင်​ပါ​တယ်
ko htut gyi October 13, 2012 at 4:16 PM
Juu Ai Size October 15, 2012 at 11:52 PM
File ​က ​ဖျက်​ခံ​လိုက်​ရ​ပြီ​လို့​ပြော​တယ်​ဗျ .. ​လုပ်​ပါ​အုံး
​ထက်​ထက်​ထွန်း October 21, 2012 at 11:45 AM
​အစ်​ကို​တို့​ရေ Superuser root ​လုပ်​နည်း​ပေး​ပြော​ပေး​ပါ​လား
Android version (2.3.6) ​လေး​ပါ​ဗျာ
​မြန်​မာ့​ဖောင်​မ​ပေါ်​လို့​ပါ ​ဘယ် root ​ကို​သုံး​ရင်​အ​ဆင်​ပြေ​နိုင်​မ​လဲ​မ​သိ​လို့​ပါ
root ​ထည့်​တာ​လဲ​မ​တတ်​လို့​ပါ ​သိ​ရင်​ပြော​ပေး​ပါ​လား​ခင်​ဗျာ...
sanmyothu88 October 24, 2012 at 2:25 AM
sony xperia miro ST 23i ​မြန်​မာ​ဖောက် ​မ​ရ​လို့ ​ဘယ်​လို့ ​လုပ်​ရ​လဲ​မ​သိ​ဘူး။ root ​လုပ်​မ​ရ​မှာ​လား။​အဲ​ဒါ​ဆို​လဲ..root.​လုပ်​နည်း​လေ....​မ​သီ​လို့ ​တင်​ပေး​ပါ​အုံး​နော်....။
ZAYAR LWIN October 24, 2012 at 3:56 PM
Ko Nyi.I have HTC sensation z710e.I have not done root.please help me.I am using viber 0860749340
sss October 26, 2012 at 4:48 PM
sony xperia neo l ​ကို ​ဘယ်​လိုroot ​လုပ်​လို့​ရ​မ​လည်း ​အ​ကို ​တ​စ်ိတ်​လောက်​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​လား
y October 29, 2012 at 11:51 AM
​အ​ကို​ရေ...​ကျွန်​တော်​ကို ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး....​ကျွန်​တော်​ဖုန်း​က imobile i style 2i ​အ​မျိုး​စား​ပါ​ခင်​ဗျာ...​ဘယ်​လို​လုပ်​ပြီ ​မြန်​မာ​ဖောင့်​ထည့်​လို့ ​ရ​တယ်​ဆို​တာ​လေး​လည်း ​ပြော​ပြ​ပါ....​ကျွန်​တော်​လုပ်​ကြည့်​တာ ​စာ​တွေ​တော့​ပေါ်​ပြီ ​ရိုက်​လိုက်​ရင်..​လေး​ထောင့်​လေး​တွေ​ပဲ​ပေါ်​နေ​လို့ ​ပါ...​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး....​အ​ကို့ ​ကို ​လေး​စား​လျှက်.....
y October 29, 2012 at 11:53 AM
​အ​ကို​ရေ imobile i style 2i ​အ​မျိုး​စား​အ​တွက်​လည်း ​ပြော​ပြ​ပါ​အုံး
tun lu November 5, 2012 at 8:43 PM
Sir I can't download myanmar font and keyboard for the Samsung galaxy note2please answer for me
justin November 10, 2012 at 2:04 PM
​အ​ကို​ကြီ ​ညီ​လေ​က TWZ808 android ​ပါ ​ခု​အ​ကို​တင်​ပေး​ထား​တာ​ကို run ​လို့​ရ​လား​ဗျ ​မော်​ဒယ်​ရွေး​သေး​လား​ဗျ ​ကျ​နော်​အ​ရင်​တစ်​ခါ​ထည့်​ကြည့်​တာ​မ​ရ​လို့​ပါ​ဗျ ​အ​ကို​အား​ရင် ​ပြေား​ပြ​ပေး​ပါ​ဦ​နော် ​တစ်​ခြား​ကို​ကြီင်္း​တို့​မ​ကြီ​တို့​လည်း​ဆင်​ပြေ​ရင်​ကူ​ညီ​ကြ​ပါ​ဦ​ဗျာ ​အ​စဉ်​လေး​စား​လျက်....
justin November 10, 2012 at 2:27 PM
NGWE MOE SILVERRAIN November 11, 2012 at 3:36 PM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ခင်​ဗျား htc model ADR6350 ​ကို root ​လုပ်​နည်း mm font ​သွင်း​နည်း​လေး ​ပို့​ချ​ပေး​ပါ​ဦး​ခင်​ဗျား
Thutaw November 23, 2012 at 9:55 AM
dailaymyo.ning.com November 26, 2012 at 7:06 PM
​ဆ​ရာ ​ကျ​နော့ ​ဖုန်း​က ​မ​လေး​ရှား​မှာ ​အ​သစ်​ထုတ်​တဲ့ CSL ​ဖုန်း​အ​မျိုး​စား​ပါ။ ​အဲ​ဒါ ​မြန်​ဖောင့် ​ကို ​ဘယ်​လို​ထည့်​ရ​မယ်။ ​ဘယ်​က ​ဒေါင်း​ရ​မ.်​ဆို​တာ ​မ​သိ​လို့ ​ပြော​ပြ​ပေး​နိုင်​မ​လား ​ဆ​ရာ​ရယ်။ ​အ​သေး​စိတ် ​ပုံ​နှင့်​တ​ကွ​မ​ရှင်း​ပြ​ရင် ​ကျ​နော်​က ​နား​မ​လည်​ဘူး​ဆ​ရာ​ရယ်။ ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး ​အီး​မေးလ်​ထဲ​ကို ​ပို့​ပေး​ရင် ​အ​ထူး​ပင် ​ကျေး​ဇူး​တင်​ရှိ​နေ​မယ်။ dailaymyo@gmail.com
wanthan December 1, 2012 at 11:43 PM
​အ​ကို​ရေ Zawgyi_One.apk/Frozen keyboard/Itextmm2.apk ​အား​လုံး​လည်း install ​လုပ်​ပြီး​ပါ​ပြီ..​စာ​ဖတ်​လို့​မ​ရ​သေး​လို့ keybord setting ​မှာ​လည်း frozen
keyboard ​ကို​အ​မှန်​ခြစ်​ထား​ပါ​တယ် ​ဘယ်​လို​ဆက်​လုပ်​ရ​မ​လဲ​ဟင် ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး​နော် ​ဖုန်း​က
restert ​မ​ကျ​သေး​ဘူး..​ဖုန်း​ကို​ဘယ်​လို restert ​ချ​ရ​မ​လဲ ​ဆို​တာ​လည်း ​ပြော​ပြ​ပါ​ဦး​နော်
Khaymar kmar December 6, 2012 at 11:33 PM
root access ​ကို​တောင်း​နေ​ပါ​တယ်..​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ..​မ​သိ​ဘူး​ပြော​ပြ​ပေး
thantkoko December 8, 2012 at 8:12 PM
​အ​ကို ZTE ​ဖုန်း​အ​မျိုး​အ​စား​ရော​မြန်​မာ​ဖောင့်​ထည့်​နည်း​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​လား​ခင်​ဗျာ...
Thein Zaw December 16, 2012 at 6:54 PM
Yang December 29, 2012 at 9:47 PM
​ဖုန်​က htc sensation z710e ​ပါ ​မြန်​မာ​ဖောင့်​ထည့်​ချင်​လို့​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး​ဗျာroot ​လည်း​မ​လုပ်​ရ​သေးလ်ု့​ပါ
kotwo January 11, 2013 at 2:43 PM
​ကို​ညီ ။​ကို​သန်း​ထွဋ် ​တို့​ခင်​ဗျာ ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး sony xperia miro st23i ​ကို ​ဘယ်​လို root ​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​အ​သေး​စိတ်​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​ခင်​ဗျာ။ http://forum.xda-developers.com ​မှာ​ဖတ်​ကြည့်​ပေ​မယ့် ​နား​မ​လည်​လို့​ပါ​ခင်​ဗျ။ 11.0A.5.5 (st23i) ​ကို Root ​လုပ်​ဖို့ 11.0 A.1.0 ​ကို ​အ​ရင်root ​လုပ်​ရ​မယ်​ဆို​တော့ ​ဘယ်​က​နေ ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မှန်း ​မ​သိ​တော့​ဘူး ​ဖြစ်​နေ​ပါ​တယ်။ ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး ​ရှင်း​ပြ​ပေး​စေ​ချင်​ပါ​တယ်။
Khalay lay February 2, 2013 at 5:51 PM
​မ​င်္ဂ​လာ​ပါ​ရှင်။ ​ဖုန်း rooting ​လုပ်​တာ ​မ​အောင်​မြင်​လို့.. ​က​လူ​ပါ​က​လရ် ​ကြ​ပါ​ဦး :(
​ဖုန်း ​က HTC ​ပါ။ ​မော်​ဒယ်​က​တော့ HTC Desire SV ​လေး​ပါ။ bootloader Unlock ​လုပ်​ပြီး​ပါ​ပြီ.
rooting ​မှာ​ပဲ ​ပွ​သ​နာ​တက်​နေ​တာ.. ​ဘယ်​လို ​မှ root ​ဖြေ​လို့ ​မ​ရ​ပူး​ဖြစ်​နေ​တယ်။ :(
​တော်​တော်​များ​များ ​စမ်း​ပြီး​ပြီ ​မ​ရ​ပူး ​ဖြစ်​နေ​လို့ ..​ကိုယ်​က​လဲ ​တ​ကယ်​မ​သိ​ပဲ
​စာ​ဖတ်​ပြီး ​က​လိ​နေ​တာ​ဆို​တော့.. ​တ​ခု​ခု​များ​မှား​တ​လား​လို့:D
​ဟို ​အ​ပေါ်​က Comment reply ​ထဲ​မှာ​တွေ့ ​တဲ့HTC desire vc ​လို​လဲ​လုပ်​ကြည့်​ပါ​တယ် ​ရ​ပူး..
...​ဒီ​တော့ ​က​လူ​ပါ​က​လရ်​ပါ.. :( ​ကူ​ကြ​ပါ​ဦး​လို့ .. :( .. ​မေ​တ္တာ​ရပ်​ခံ​စွာ​ဖြင့်...... :thanx
Thuya Htun February 14, 2013 at 8:43 PM
​အစ်​ကိူ​ရေ sony xperia ST21i ​ကိူ​မြန်​မာ ​ဖောင့်​ဘယ်​လို ​ထည့်​ရ​မ​လဲ ​တစ်​ဆိတ်​လောက် ​ဖြေ​ကြား​ပေး​ပါ ​ခင်​ဗျာ
konaingnaing February 15, 2013 at 3:10 PM
​အစ်​ကို ​ကျွန်​တော့်​ဖုန်း​က NOKIA E63 ​ပါ...​ထည့်​လို့​ရ​ပါ့​မ​လား​ခင်​ဗျာ....
Mis. Poe February 22, 2013 at 10:20 AM
​မ​င်္ဂ​လာ​ပါ​ရှင်...​ညီ​မ​ဖုန်း​က Sony XPERIA..... Android Version ​က​တော့ 2.3.4 ​နဲ့ Build Number ​က 4.0.2.A.0.62.....​မြန်​မာ​စာ​နေ​ရာ​မှာ​အ​တုံး​အ​တုံး​လေး​တွေ​ပဲ​ပေါ်​နေ​လို့...​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး​ဗျာ..........
blue March 3, 2013 at 8:39 AM
sony xperia p ​ပါ ​ကီး​ဘုတ်​ရော font ​ရော ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ် ​ဒါ​ပေ​မဲ့ Select language ​က chinese korean japan font ​နေ​ရာ ​မှာ ​အ​တုံး​တွေ ​ဖြစ်​သွ​ပါ​တယ် ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး
naykha20 March 7, 2013 at 12:09 PM
​အ​ကို ​ကျွန်​တော့ ​ဖုန်း u8825d ​အ​တွက် ​မြန်​မာ​ဖောင့်​လေး​များ ​လုပ်​ပေး​နိုင်​မ​လား​ဟင်.. ​သူ​တို့​ပြော​တာ ​တော့ root ​ဖောက်​ရ​ဦး​မယ် ​ပြော​တယ် ​စောင့်​ရ​မှာ ​ကြာ​မယ်​လို့​ပြော​လို့ ​အ​ကို ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​ဆို ​ကျွန်​တော့ ​ဖုန်း​အ​တွက် ​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​ဦး​ဗျာ ​ကျွန်​တော့ ​အ​ကောင့်​နာ​မည်​က naykha20@gmail.com ​ပါ ​အ​ကို
zaw naing March 8, 2013 at 1:50 PM
​ဘယ်​နား ​ဒေါင်း ​ရ​မ​လဲ​မ​သိ​ပါ ​လုပ်​ပါ​ဦး ​ကီး​ဘုတ်​လို​ချင်​လို့
​ပျံ​လွှား March 11, 2013 at 7:49 PM
​အ​ကို​ကျွန်​တော့​ဖုန်း​က​တော့ ZTE V9A ​ပါ....​ထည့်​လို​ရ​မ​လား​ခင်​ဗျာ...
​ညီ​ညီ​စိုး​စံ March 31, 2013 at 2:07 AM
​အစ်​ကို ​ရေ ​ကျွန်​တော်​ဖုန်း​က iPhone 3G ​ပါ version 4.2.1 ​ကို ​မြှင့်​လိုက်​ပြီး jailbrake ​ပြန်​လုပ်​လိုက်​တာ ​မြန်​မာ keyboard ​က​မ​ပေါ်​တော့​လို့ cydia ​ထဲ​မှာ​ရှိ​တဲ့ macforus repo ​က​နေ ​ပြန်​ပြီး ​ထည့်​တာ​လည်း​မ​ရ​လို့​ပါ ​မြန်​မာ​စာ​တော့​ပေါ်​တယ် keyboard ​ပဲ​မ​ရ​တာ​ပါ ​လုပ်​လို့​ရ​မယ့်​နည်း​လမ်း​လေး​များ​ရှိ​ရင် ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး​နော်
Aungthaw Zin April 10, 2013 at 4:20 PM
huaweiT8833 foe font lay brother
​နိုင်​နိုင် April 23, 2013 at 4:56 PM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ရေ nokia asha 311 ​အ​တွက်​ရော​မြန်​မာ​ဖောင့်​မ​ရှိ​ဘူး​လား​ခင်​ဗျာ ​ရှိ​ရင်​တင်​ပေး​ပါ​လား
kyaw April 26, 2013 at 8:06 PM
kyaw April 26, 2013 at 8:09 PM
myat aung May 1, 2013 at 4:46 PM
​ဆ​ရာ ​ကျွန်​တော့်LG-e400f​ကို root ​လုပ်​ချင်​လို့​ပါ။​ဘာroot tool ​သုံး​ရ​မှန်း​မ​သိ​လို့​ပါ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး။
Ko Kyaw May 8, 2013 at 4:21 PM
​ဆ​ရာ​ငေ်​ဗျ imobile istyle q2 myanmar font ​တင်​နည်း​လေး ​အြော ​ပြ ​ပေး​ပါ​ခင်​ဗျာ
Daewer Hein May 11, 2013 at 2:04 AM
Frozen Keyboard down ma ya yin
naingoo May 15, 2013 at 11:33 AM
asus memopad ​နဲ asus fonnepad ​ကို​ရေး​လို​ဖတ်​လို​ရ​အောင်​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​လား​ဗျာ
Ye Naing May 16, 2013 at 10:06 AM
​ကျွန်​တော့်​ဖုန်း​မှာ ​မြန်​မာ​စာ​ပေါ်​ပြီ ​မြန်​မာ​စာ​ရိုက်​လို့​မ​ရ​ဘူး ​အဲ​ဒါ​ဘယ်​လို​ဖြေ​ရှင်း​ရ​မ​လဲ ​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​ဦ​ဗျာ
Ye Gyi May 19, 2013 at 5:12 AM
​ကျွန်​တော့်​ဖုန်း​က LenovoS890 ​ပါ။ ​မြန်​မာ​လို​ဖတ်​လို့​မ​ရ​လို့ root ​ဘယ်​လို​ချ​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ ​အ​ကြံ ​လေး​ပေး​ပါ​အုန်း။
madhu gimiray May 19, 2013 at 8:00 PM
​ကို​ညီ ​ကျွန်​တော.​ဖုန်း​က​တော. ANDROID GT7100 version 4.1.1 ​ကို​ဘယ်​လို root ​လုပ်​ရ​မှာ​လဲ​အ​ကြံ ​လေး​ပေး​ပါ​အုန်း။
madhu gimiray May 19, 2013 at 8:09 PM
​ကျွန်​တော့်​ဖုန်း​က ANDROID GT7100 version 4.1.1​ကို ​မြန်​မာ​လို​ဖတ်​လို့​မ​ရ​လို့ root ​ဘယ်​လို​ချ​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ ​အ​ကြံ ​လေး​ပေး​ပါ​အုန်း။
​အောင်​သူ​ရ May 19, 2013 at 11:04 PM
​ကျွန်​တော့်​ဖုန်း​က sonyLT15i ​ပါ။ ​မြန်​မာ​လို​ဖတ်​လို့​မ​ရ​လို့ root ​ဘယ်​လို​ချ​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ ​အ​ကြံ ​လေး​ပေး​ပါ​အုန်း။
​သူ​ရ May 21, 2013 at 6:45 PM
Android Tutorials / Android ​ဖုန်း root ​လုပ်​နည်း​များ / ​မို​ဘိုင်း​ဖုန်း​ဆိုင်​ရာ Tutorials | By Hein Maung
V Root ​လို့​ခေါ်​တဲ့ Onclick Root Tool ​လေး​ပါ​ခင်​ဗျာ
myanmar mobile app ​က​ပါ​ခင်​ဗျာ
aung myo June 3, 2013 at 11:11 PM
​ကျွန်​တော့်​ဖုန်း​က samsung ​ပါ.root ​လုပ်​ဖို့​အ​တွက်​အ​ဆင့်​လေး​တွေ​ပြော​ပြ​ပါ​လား​ခင်​ဗျာ
iROFLMAO June 6, 2013 at 2:51 PM
How to install zawgyi on HTC one (rootedl)
AUNG LIN NAING June 6, 2013 at 11:15 PM
sony tablet s ko bal lo mha root lo ma ya phyit nay lo ku nyi par oo. myanmar font lae ma ya bu phyit nay tal
yumshin June 16, 2013 at 5:56 AM
eindaw June 20, 2013 at 1:20 AM
sony experia sp ​မြန်​မာ​ဖောင့်​ရ​အောင် ​သင်​ပေး​ပါ​အုံး
Ty Kyaw July 3, 2013 at 8:20 PM
galaxy grand cann't use the same myanmar and english keyboard
King Khan July 15, 2013 at 3:09 PM
A ko yay kya naw phone ka Huawei 610S phone par..Android version ka 4.2.1 root ma lote pae myanmar font myin chin lo par ae dar bal lo lote ya ma lae pyaw pya payy par ohm
Aung Min Thu July 15, 2013 at 10:25 PM
Huawei S8600 ​ကို Myanmar font ​ဘယ်​လို​သွင်း​ရ​မ​လဲ​ခင်​ဗျာ ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး
NG gyi July 20, 2013 at 12:19 AM
​ကျ​နော်​လည် ၁​ပါ​ပဲ ​ဘာ​လုပ် ​ရ​မယ်​မ​သိ​လို​ပါ
kyaw lay July 21, 2013 at 3:00 AM
​မြန်​မာ font ​ဘယ်​လို​မှေ​ဒါင်း​လို့​မ​ရ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ် ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး
​စိုင်း​ဆမ်(​မုံ​ရွာ) July 21, 2013 at 10:38 PM
​အစ်​ကို​ရေ ​ဘ​လော့​မှာ ​မီး​နူး​လေး​ထည့်​ပုံ​ရှင်း​ပြ​ပေး​ပါ
Sinwali Maran July 27, 2013 at 10:23 AM
tun moe lwin July 30, 2013 at 9:48 PM
kaw bouk August 2, 2013 at 1:46 AM
​အ​ကိုး xperia sp ​ပါ ​ကူ​ညီး​ပါ​ဆ​ရာ ​ကျေး​ဇူ​ပါ​ဆ​ရာ
ina August 18, 2013 at 1:46 AM
pls help me.my laptop is windows8(dell).how to take myanmar keyboard?i don't know.so pls help me.tq
Soul Phyoe August 31, 2013 at 9:33 PM
​အ​ကို​ရေ ​ညီ​လေး​ဖုန်း​က LG Optimus L7 705 ​အ​မျိုး​အ​စား​ပါ ​ညီ​လေး​ဘာ​သာ Root ​ချိုး​ကြည့်​တာ​လဲ​စုံ​နေ​ပါ​ပြီ ​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​ဦး ​အ​ကို​ရေ ​လေး​စား​စွာ​ဖြင့်
​ထွန်း​လင်း​အောင် September 2, 2013 at 11:46 AM
​ဆ​ရာ​ကို​ညိ​နေ​မင်း ​ခင်​ဗျား ​ကျွန်​တော်​က Sony Ericsson Xperia Ray​ကိုင်​ပါ​တယ် Ray ​ရဲ့​အ​ရင်​ဗား​ရှင်း​အ​ဟောင်း​တုန်း​က ​သူ​ငယ်​ချင်း​အ​ကူ​အ​ညီ​နဲ့ Root ​လွယ်​လွယ်​ကူ​ကူ​ရ​ခဲ့​ပါ​တယ်။​ဖုန်း​ကို fireware ​တင်​ပြီး​မှ root ​လုပ်​လို့​မ​ရ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ်။​ကျွန်​တော်​နည်း​မျိုး​စုံ​နဲ့ ​စမ်း​ထား​ပါ​တယ် ​တက်​သ​လောက်​ပေါ့​နော်..​ဒါ​ပေ​မယ့်​ခု​ချိန်​ထိ​မ​အောင်​မြင်​သေး​ဘူး ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ရ်ျ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ ​လေး​ဖြေ​ကြား​ပေး​ပါ​နော်...Sony ​ဆိုဒ်​က​နေ​လည်း ​ဒေါင်း​လို့​ရ​သ​မျှေ​ဒါင်း​ထား​ပါ​တယ် ​ခု​ထိ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​တာ​ပါ ​နောက်​တစ်​ခု​ထပ်​သိ​ပါ​ရ​စေ ​ကျွန်​တော့ Ray ​က Camera 8Mp ​ပါ​ပါ​တယ် ​အ​ရင်​ဗား​ရှင်း​အ​ကောင်း​တုန်း​က​တော်​တော်​ကြည့်​တယ်​တော်​တော်​ကောင်း​တယ် ​ခု​တော့ Huawei 5.0 ​နဲ့​တောင်​ယှဉ်​ရိုက်​လို့​မ​ရ​တော့​ဘူး ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ရ်ျ​ဖြေ​ကြား​ပေး​ပါ​နော်..​အစ်​ကို ​လေး​စား​လျှက် ​ထွန်း​လင်း​အောင်
mosit har September 2, 2013 at 11:56 PM
root ​လုပ်​ဖို့​လို​သေး​လား​ခင်​ဗျ ​ပြန်​ဖြေ​ပါ​နော်​ကျေး​ဇူး​တင်​လျက်
Pyone Maung Maung Chit September 6, 2013 at 1:23 PM
​ကျွန်​တော့်​ဖုန်း​က Huawei Ascend p6-u06 ​ပါ ​မြန်​မာ​ဖောင့် ​မ​မှန်​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ်
​အ​ချိန်​လေး ​နည်း​နည်း​လောက်​ပေး​နိုင်​မယ်​ဆို​ရင် ​လုပ်​ပုံ​လုပ်​နည်း​လေး​ကို
​တစ်​ဆင့်​ချင်း​စီ​လောက် ​ရှင်း​ပြ​ပေး​ပါ​လား ​အစ်​ကို​ရေ ...
​ကျေး​ဇူး​ပါ ​အစ်​ကို ...
Pyone Maung Maung Chit September 6, 2013 at 1:27 PM
​အစ်​ကို​ရေ ... ​ကျွန်​တော့်​ဖုန်း​က huawei ascend p6-u06 ​ပါ
​အစ်​ကို ​အ​ချိန်​ရ​ပြီး ​ဖြစ်​နိုင်​မယ်​ဆို​ရင် ​တစ်​ဆင့်​ချင်း​စီ ​ရှင်း​ပြ​ပေး​ပါ​လား ​အစ်​ကို​ရယ်
Pyone Maung Maung Chit September 6, 2013 at 1:31 PM
Ko Latt September 12, 2013 at 5:03 PM
​ကျန်​တော့်​ကို​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​လား ​ခင်​ဗျာ။​ကျန်​တော်​က LG prada 3.0 ​ကိုင်​ထား​တာ​ပါ။​မြန်​မာ​စာ​မ​ရ​လို့​ပါ။Root ​လည်း​လုပ်​ပြီး​ပြီ။frozen keyboad ​လည်း​သွင်း​ထား​တယ်။​မြန်​မာ​စာ​မ​ပေါ်​လို့။
thantzin tun September 19, 2013 at 3:03 PM
​ဆ​ရာ font ​က ​မြန်​မ​လို kgmalay ​လို့​ရိုက်​တာ ​ကော​မင်​ဖြစ်​နေ​တယ် ​ဘယ်​လို​ဖြစ်​တာ​လဲ​ဗျ
soe September 22, 2013 at 12:59 PM
Sony Ericsson Xperia Neo V ​အ​တွက် root ​နည်း​နဲ့ software ​လေး​တင်​ပေး​ပါ​လား​ဗျာ
Cobber October 21, 2013 at 3:29 PM
android 4.3 ​ကို ​ဘယ်​လို ​မြန်​မာ​ဖောင့်​သွင်း​လို့​ရ​နိုင်​ပါ​မ​လဲ
sai leng October 31, 2013 at 7:11 AM
​ကျွန်​တော်​ဖုန်း​က...LG optimus L6 ​ဖြစ်​ပါ​တယ် ​မြန်​မာ​ဖောင်.​မ​ထည်.​တတ်​လို.​ကျေး​ဇူး​ပြု ​ပြီး​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မယ်​ဆို​ဒါ​ပြော​ပြ​ပါ​အုံး....
naynay minhtike November 5, 2013 at 8:51 PM
​အ​ကို…… Samsung Galaxy Note3 ​မြန်​မာ ​ဖောင့် ​ထည့်​မ​ရ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တာ ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး
lovely snow November 27, 2013 at 11:07 PM
Iphone5?/
ma ya buu lar ..
I can't install it could you help me pls
Smith minmin December 1, 2013 at 9:27 PM
I would like to request one thing. I bought Andropad Mini Q082-3G Andriod Version 4.2.2 tablet. As you already know, I can't read Burmese font. It needs rooted. But I don't know how to root. I am now in Thailand. Could you please help? I'd like to know how, the steps by steps rooting, it can be rooted. Thanks
Tin Tun Aung December 9, 2013 at 9:39 PM
how can I install myanmar font on HTC Mini One ( Android Version 4.2.2 )?
Please help me to answer this ..
fuck December 10, 2013 at 3:51 AM
i did already in my mobile samsaung galaxy s3 but i can write but i can'
t see what i write for other people they can see what i write and for fb and gtalk can't see any thing
​မိုး​ညို​သား December 31, 2013 at 2:45 AM
you needaroot bro
and then install zawgyi font with zawgyi changer
Yin Nyein Thu December 13, 2013 at 7:58 AM
After I upgraded to android version 4.3 ,,,can't see mm font.I want to see mm font w/o using browser.
mai maii December 29, 2013 at 5:57 PM
Hi - I'm using Samsung Galaxy Note 2, I just updated my phone version (Android 4.3). After updated, I can't able to see and type Myanmar font which already have the frozen keyboard and zawgyin one ttf in my phone. Kindly advice me.
Heinzaw Ko January 1, 2014 at 1:04 PM
Frozen keyboard pro ​က update ​ထပ်​မ​ထွက်​တော့​ဘူး​လား ​သုံး​ရ​တာ​ကြိုက်​တယ် ​အ​ကြိုက်​ဆုံးkeyboard ​ပါ ​ခု 6.0 ​သုံး​လို့​မ​ရ​တော့​ဘူး update ​တောင်း​နေ​တယ် 5.3 ​ပြောင်း​သုံး​တာ​တော့​အ​ဆင်​ပြေ​နေ​တယ် ​တ​ခါ​တ​ခါ keyboard error ​တက်​တက်​လာ​လို့​ပါ
baz ooka January 19, 2014 at 1:00 AM
​အ​ကိုေ ​ရ ​ကျွန်ေ ​တာ်​ကေ ​တာ့ Sony Ericsson Xperia M ​ပါ
Pls tell me how to restart. Well I have already click the BaganKeyboard
myoo thu January 22, 2014 at 8:28 AM
Please help me, Now can't see myanmar font at sansung note2version 4.3 .how we can do ?...please talk to me...
lwin February 4, 2014 at 4:06 AM
​အ​ကို ​ကျ​မ​ဖုန်း​က Note2/ ​တ​ခု​နဲ့ ​နောက်​တ​ခု​က S3 ​ပါ ​မြန်​မာ​ဖောင့်​ထဲ့​ချင်​တာ download ​လုပ်​ရ​မဲ့ link ​လို​ချင်​ပါ​တယ်။
yeko swe February 4, 2014 at 2:33 PM
​အစ်​ကို​မ​င်္ဂ​လာ​ပါ​ခင်​ဗျား။​ကျွန်​တော်​ဖုန်း​က s4 ​ပါ​အစ်​ကို ။​မြန်​မာ​ဖောင့်​ထည့်​မ​ရ​လို​ပါ​ခင်​ဗျား။ ​နည်း​လေး​ရှိ​ရင်​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​အုံး​ခင်​ဗျား။​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျား။ sweyeko@gmail
zar li February 7, 2014 at 12:17 PM
Nokia window phone ko bal lo mha root lo ma ya phyit nay tal myannar font lae ma ya phyit nay tal ku nyi par oo
mon February 11, 2014 at 4:39 PM
i also have this issues.After i updated to 4.3, can't see and read mm font.
Even i reset to factory data also, android version no change.If you have solution, pls share more details.
aung thura March 9, 2014 at 10:43 PM
need root for mm font
​အ ​ချစ်​ဆုံး March 19, 2014 at 12:05 AM
benq A3 phone ​မြန်​မာ ​ဖောင့် ​ထည့်​မ​ရ​လို ​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ
​အ ​ချစ်​ဆုံး March 19, 2014 at 12:08 AM
​မ​င်္ဂ​လာ​ပါ​ခင်​ဗျား ​ကျွန်​တော့ ​ဖုန်း​က benq A3 ​ပါ ။​မြန်​မာ​ဖောင့်​ထည့်​မ​ရ​လို​ပါ​ခင်​ဗျား။ ​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ kominoo123@gmail.com
MG Git Gi April 28, 2014 at 10:21 PM
Frozen Keyboard v1.01
Full Version ​ပါ Theme ​နှစ်​ခု​ပါ​တယ် Font ​သုံး​ခု ​မြန်​မာ၊​ရှမ်း၊English
Kan Sein May 23, 2014 at 7:39 AM
How can I makearoot for HTC Desire 600c?
Kan Sein May 23, 2014 at 7:40 AM
Can I get frame ware for HTC Desire 600c?
​ကို ​စိုင်း​နော် June 16, 2014 at 1:35 AM
​အစ်​ကို ​ရေ ​ကျ​နော် ​လည်း ​ဆိုက်​စုံ​နေ​ပီ ​စာ​တွေ​ဖတ်​လိုက် ​တွေ့​တဲ့ ​ကီး​ဘုတ်​မှန်​သ​မျှ ​ဒေါင်း​လုပ်​ဆွဲ​လိုက် ​စမ်း ​လိုက် ​နဲ့ ​မ​ရ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ် android 4.4.2 ​အ​တွက် ​မြန်​မာ ​အ​င်္ဂ​လိပ် ၂ ​ခု ​တွဲ​သုံး​လို့​မဲ့ keyboard ​လေး ​ရှိ​ရင် ​တင်​ပေး​ပါ​လား​ဗျာ...... ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​သည်........
tar soe October 27, 2014 at 8:56 AM
i can't read myanmar leauge
now i use S II
Yannaing Moe November 17, 2016 at 11:11 AM
အကိုတို့ရေ ကျွန်တော့်ဖုန်းလေးက redmi note4ပါ myanmar font မရတော့လို့ ကူညီကြပါဦးဗျ ကျေးဇူးပါ
kyaw lay March 12, 2017 at 12:28 PM
Mi 4s လေး Root ဖောက်ချင်လို့ Version 5.1.1
MIUI 8.1 (မြန်မာစာအတွက် မဟုတ်ပါ)
Aye Chan Aung May 3, 2017 at 10:14 AM
Android ph မှာ pdf ဖတ်ရင် မြန်မာစာအာုးံးမပေါ်တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ